Dhibaatada ciidaha ee iOS 7.1.2 | Wararka IPhone
Waxaan ka badneyn toddobaad ka dib macruufka 7.1.2 waxaa sii daayay Apple si xalliyaan dhibaatooyin taxane ah oo xagga amniga ah taas oo ku sii jirtay noocyadii hore ee nidaamka hawlgalka ee qalabka mobilada. Hormarinta ugu muhiimsan ee macruufka 7.1.2 la yimid ayaa ah sirta ku xirnaanta lifaaqyada emayllada lagu soo diro Boosta, kuwaasoo laga tagay iyagoo aan la ilaalin. Hadda isticmaalaha Lithuania Ipad waxay ogaatay in macruufka 7.1.2 uu soo saaray a Dhibaatada Kalandarka oo si khaldan u muujisa ciidaha dalka.
Waa wax lagu qoslo taas marka Apple isku dayo inuu saxo dhibaato, kuwa kale ayaa soo muuqda taas oo aan hore u jirin, xusuusnow dhibaatooyinka shirkadda la soo dersay isbeddelada waqtiga iyo digniinta iyo isbeddelada sannadka. Marka laga hadlayo dhibaatadan cusub ee la ogaaday dheh taas kama dhacdo dhammaan waddammada, sida muuqata waxay kaliya dhacdaa (xilligan) gudaha Lithuania, Hong Kong, Mexico iyo Canada. Wadamadan, haddii aan fiirino ciidaha Jadwalka, si sax ah looma soo bandhigi doono, laakiin qaladka waa la xalliyaa haddii Mareykanka, Boqortooyada Ingiriiska ama Ruushka loo dejiyo waddanka asalka u ah aaladda.
Isticmaaluhu wuxuu la xiriiray shirkadda Cupertino, oo leh xaqiijiyay inay khaldan yihiin oo ay isku dayi doonaan inay saxaan adoo adeegsanaya cusbooneysiin software ah DHAQSO BADAN. Waqtiga ay qaadatay iOS 7.1.2 inuu soo muuqdo, way nagu adag tahay inaan si dhakhso leh u aragno nooc cusub oo xallinaya dhibaatada Jadwalka, macruufka 7.1.3. Aynu rajaynno in Apple uusan badbaadin xalka cayayaanka loogu talagalay sii deynta macruufka 8 waana inaan hubinno haddii qaladku sidoo kale ku jiro noocyadiisa beta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » IOS 7.1.2 waxay leedahay cilad leh ciidaha Jadwalka
Haddii Apple xalka u hayn lahaa Cayayaankaas illaa iOS 8 wax dhib ah ima qabin. Xaqiiqda ah inay sii daayaan macruufka 7.1.3 oo leh qaladaad la hagaajiyay markii la dhaafo waxay sababi kartaa inay xiraan Jailbreak aysan xirmin iOS 7.1.2 mana aheyn fikrad xun in xabsi daa'in weligiis ah lagu sii daayo qalabka kaliya gaara iOS. 7, laakiin dabcan Waa arin dhadhan.
Sida ku xusan maqaalka, waxay leedahay dhibaatadan waxay ka jirtaa jadwalka taariikhda Mexico, horey ayaan u raadiyay oo ciidaha ayaa sax ah
Waxaan eegay jadwalkayga (Mexico) runtiina waxaan helay qaladaad qaarkood sida maalinta dastuurka, maalinta hooyada, dhalashada BJ, iyo kuwo kale.
Waxaan rajeynayaa in dhawaan la xallin doono
Waxaan haystaa IDevices-kayga oo ka diiwaan gashan Dominican Republic, ciidaha Mexico waxay umuuqdaan kuwa la xushay, oo aanan waligay dooran.
Waxa ugu xun ayaa ah in mar kasta oo aan tirtiro ciiddan, in kasta oo aan idhaahdo waa la tirtiray, marka la furayo kalandarrada, ciidaha Mexico waa mar kale
Ku jawaab pivek
Run, dhalashada Benito Juárez waa khalad
Ramiro Ranaueo sawir qaade dijo
Sideen dalkeyga uga dhigaa inuu ii muuqdo?
Jawaab Ramiro Ranaueo
Sida ay ogaadeen in cusbooneysiintani ay dhibaatooyin ku leedahay dalabyada waraaqaha iPhone lafteeda lafteeda. Markaad rabto inaad baabiiso, way ku dhegtaa ama way ku dhegtaa!
Haa waxaa la siiyaa ios7.1.3 Waxaan diirada saaray inaan ku sii hagaajiyo iPhone 4
Ku jawaab kaatun
Links kala soo bixi macruufka 8 Beta 3